Chinjana mabhuku kubva kuPadad yako kuenda kuMhando yako kubva kuFiles app pane iPadOS 13 | IPhone nhau
Chinjana mabhuku kubva kune yako iPad kuenda kune yako Kindle kubva iyo iPadOS 13 Mafaira app
Kuverenga mabhuku hakusi izvo zvazvaimbova. Mazuva ese tinoona vanhu vazhinji vachiverenga pamidziyo yavo, mabhuku emagetsi, mapiritsi, makomputa uye nhare. Uye zvakare, iyo nzira yekuisa mabhuku mumidziyo iyi yatove nyore. iPadOS 13 uye iOS 13 kunounzwa pamwe navo kugona kuverenga ekunze ekuchengetera michina (USB, HDD, SDD) uye kunyange kutamba nekutamisirwa kwedata kubva kune yako iPad kuenda kune mudziyo uri mubvunzo. Ndozvatinogona kuita plugging iyo kindle kune yedu iPad kana iPhone: Tora mabhuku kubva kuFiles yako app kune yako Kindle nekukurumidza.
Kutora mukana weiyo Files app nePadOS kana iOS 13 uye Kindle
Iyo maFiles app inokutendera iwe kuti uwane magwaro ako ese uye uatonge iwo zvisinei iwe aunoda kubva panzvimbo imwechete. Uye iPadOS inokupa nzira nyowani dzekuona, kushanda, uye kugovana mafaera ako.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuve ne USB-C kune USB-A adapta mune iyo iPad Pro, kana a Mheni ku USB-A adapta. Nenzira iyi tinogona kubatanidza Kindle yedu kune yedu iOS kifaa. Patinobatanidza chishandiso, kana tikapinda muFiles app, tichaona kuti inochiona seyakabvisa memory memory (senge USB). Saka maneuver iri nyore kwazvo: chinja mafaera kubva kuchombo chako kuenda kuMhando.
Kuti tiite izvi, tinogona kuwana akasiyana epa online mabhuku ezvitoro ayo anotendera kurodha mukati meMhando kana Epub fomati. Izvo zvakakosha kuti kana isu tabvumirana kurodha aya marudzi emafaira Ngativei nechokwadi chekuti tinoitora kune yedu kifaa. Ese mafaera atinotora anoenda akananga kune «Downloads» dhairekitori reFiles app. Kana tangova nemabhuku mune akakodzera fomati, isu tinodzokera kuapp totsvaga mafaera aya.
Dzvanya pa "Sarudza" uye sarudza mafaera ari mubvunzo. Uye tinya pane iyo icon bhainda, kutamisa mabhuku. Tichafanirwa kusarudza kuti nzvimbo yekuenda ndiyo yedu Kindle. Uye gadzirira! Isu tinobvisa iyo USB-A kubva kuadhaputa yedu uye tichava nemabhuku matsva anowanikwa tisina kana kuve nelaptop. Iyo iPad ne iPhone zvave kuita zvakasiyana siyana nezvitsva mumaApp Files.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chinjana mabhuku kubva kune yako iPad kuenda kune yako Kindle kubva iyo iPadOS 13 Mafaira app
ITunes Remote App Zvino Inotsigira iOS 13 Rima Mamiriro
Zvakanakisa zvigadzirwa zveApple kupa ino Kisimusi